Aceri5 5gen အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Than Min Htoo
Hello.အသန့်မှကြိုက်သူများလာပီနော်။aceri5 . 5gen. Ram-8gbစိုက်ထား။ hdd-500gb၊.graphic-2gbနော်။ဈေးလား=380000ksပါ။ဖုန်း=09790469122.မြဝတီ
အမည်: Aceri5 5gen